Zvinhu Zvinokosha Kuti Uzive pamusoro peCNNP Collaboration Certification - ITS
Zvinhu Zvinokosha Kuti Uzive pamusoro peCNNP Collaboration Certification
Career Oportunity muIt
CCNP Kubatanidzwa Purojekiti Yekuongorora-
Recertification yeCCNP yakarongedzwa kushanda
CCNP Collaboration Certification : Izvo zvinodiwa zvinodiwa zveyanyanzvi uye kuwedzera kwevashandi vanorwisana nehuwandu hwemabasa akaunza zvitsva zvekuyera uye zviratidzo. Izvi zvinonyanya kukosha muTIM industry apo mamiriro acho akaipa, nekuda kwekuwedzera kufambira mberi kwebhizimisi mune zvose. Mumwe anofanirwa, nekudaro, kuva mutongi paanenge asarudza kusunungura mano avo uye kutsunga kwezvidzidzo uye zvidzidzo zvinofanira kuvakirwa pairi sezvazvakaita.
Mazita ekuremekedzwa mune zvebhizimusi reTI ndeaya Cisco Zvidzidzo uye vane hurongwa hwakajeka hwekusimbisa munhu. Iyo piramidi iyo inotora mushure mayo ine mazinga nenhamba yemufambiro muchengeti, inotungamirirwa nehutano hweSvondo, panguva iyoyo Professional level, inotevera inyanzvi yeZvesiti pakupedzisira kumusoro ndeye Architect level. Kunze kubva pachikamu chechikamu chega rimwe nerimwe rine zvipfumbamwe zvidzidzo uye zvidzidzo zvinofanira kudzidza nekujekesa imwe neimwe. Izvo zvigwaro zvekufamba kwavo zvinotevera-
Nhamba imwe neimwe ye piramidi ine chikamu chayo chokutamba uye inosanganisira imwe nzira itsva kuti igutse zvakakosha zvemashoko akasiyana emabasa. Izvo zvakakwirira iwe unoenda mumatanho iwe unhu hunosimudza uye dzidzo dzinodzidzira hunoita hutano hwako hweKunyanisa. Iko 'Professional Level' yakatevera zvikwangwani -
CCNP Routing uye Kuchinja
CCNP Collaboration iri basa rinowiridzirwa chirongwa uye kudzidziswa kunoitwa, kuyeuka, kuvandudza ruzivo rwako uye kukwanisa kuratidza 'Bhizimusi rinokosha'. Kune chero iyo inoshandiswa musangano sangano rebhizimisi rinobudirira nekufambisa inonyanya kukosha uye CCNP Collaboration zvine zvombo izvi zvekukwanisa kugadzirisa kushanda kwesangano rako rekubatana.
Iwe unogona kuita ichi chiziviso mushure mekudiwa kweCentral CCNA Collaboration certification kana chero CCIE certification. Izvo zvinotevera ndezvedzidzo yakarongerwa yaunofanira kuwana
Kutonga Cisco IP Telephony neVhidhiyo, Chikamu 1
Kutonga Cisco IP Telephony neVhidhiyo, Chikamu 2
Kuongorora Cisco IP Telephony neVhidhiyo
Kuita Cisco Collaboration Applications
Izvo zvinotevera ndezvenyaya dzaunofanira kuisa-
Zvinotevera ndezvipi zvinyorwa zvinofadza zveongororo:
300-070 CIPTV1 - 75 maminitsi - 55-65
300-075 CIPTV2 - 75 maminitsi - 50-60
300-080 CTCOLLAB - 75 maminitsi - 55-65
300-085 CAPPS - 75 maminitsi - 55-65
Munhu ari 18years kana kuti pamusoro apa anokwanisa kuongorora.
Kuongororwa kwekuedzwa kunogadzirisa archive nekombiyuta yemufananidzo uye yakakurumbira maraka, saizvozvowo, zviratidzo zviviri zviri muhurumende. (Pasina kudarika imwechete kuisa chiratidzo).
Vanhu vanogara mumarudzi akadai - Cuba, Iran, Siriya, North Korea neSudan zvinongororwa kubva pakuongorora uku.
Zvikamu zvinoverengerwa zviri pawebhu uye zvinonzi ndezvokubhadhara zvishoma kudarika kana kuputika.
Tariro inofadza yekugara kugara yakasimba kwemazuva mashanu purogiramu yekudzorera kuongorora.
Mushure mokunge magumo apedzisa kuongorora mutsara wechikwata wakanyorwa nemifananidzo yekombiyuta yetariro inobviswa.
Iwe unogona kutarisa mberi, chimiro uye mapepa ekufarira kwechirongwa ne-Cisco Certifications Tracking System.
Chiratidzo chacho chakakodzera kwenguva refu uye chinogona kugadziriswa nekupfuura chero chekutevera musati wasvika pakupera kwekuongorora:
Iye zvino 642-XXX / 300-XXX Ongororo yepamusoro yepamusoro,
Current CCIE Kunyora Kuongorora,
Ikozvino CCDE yakaumbwa / pasi pasi Land Examination,
Chinokosha kupfuura zvose ndechokutsvaga chiziviso nekudzidziswa kubva kune Cisco Learning Partner yakanyorwa se- "ITS"Uyo anopa zvikamu zvenguva ichangopfuura, dzinozorodzwa uye dzakanakisisa dzeCisco zvidzidzo zvekubatana nevadzidzisi.
Onawo: CCNA Certification - A Complete Guide
Nhanho Nhanho Mutungamiri kuti uve CCNP Wireless Certified Professional